Paragon Software's NTFS driver ichaiswa muLinux 5.15 | Linux Vakapindwa muropa
Paragon Software's NTFS driver ichaiswa muLinux 5.15
Mazuva mashoma apfuura takagovana pano pa blog nhau nezve chii Linus Torvalds akakumbira Paragon Software kuti iendese kodhi yacho kuti ibatanidze mutyairi wake mutsva weNTFS. Panguva iyoyo zvaifungidzirwa kuti mutyairi anogona kuwedzerwa muLinux 5.14-rc2, izvo zvisina kuitika, asi ichave iri kubatanidzwa mune vhezheni yeLinux 5.15
Uye ndizvo izvozvo panguva yekukurukurirana mumagazini nhamba 27 kubva pachigadziko, kuiswa kwacho kwakaburitswa munguva pfupi yapfuura kubva kuParagon Software's NTFS faira system uye iyo chaizvo Linus Torvalds yakapa iyo girini mwenje kuti ishandiswe mukati meLinux, sezvayakataura kuti "haione zvipingamupinyi pakugamuchira iyi seti yemachira muhwindo rinotevera kubvuma shanduko. Kunze kwekunge zvinhu zvisingafanoonekwi zvikaonekwa, Paragon Software's NTFS rutsigiro ichabatanidzwa mu kernel 5.15, inotarisirwa kuburitswa muna Mbudzi. "
Munguva iyo kusvikira zvigamba zvagamuchirwa mune tsanga, Linus yakakurudzira kuongorora zvakare kururamisa kwesiginecha pazvimedu ichisimbisa kunyora kwekodhi yakachinjiswa uye kugadzirira kwekuparadzirwa kwayo sechikamu chekernel pasi pekodhi yakavhurwa sosi. Izvo zvakakurudzirwa zvakare kuti Paragon Software zvakare ive nechokwadi chekuti iro dhipatimendi repamutemo rinonzwisisa mhedzisiro yese yekuchinjisa kodhi pasi peGPLv2 rezinesi uye inonzwisisa musimboti weiyi kopyleft rezinesi.
Iyo kodhi yeiyo nyowani yeNTFS mutyairi yakaburitswa neParagon Software muna Nyamavhuvhu gore rapfuura uye inosiyana neiyo yatove mumutyairi kernel nekugona kushanda mukunyora mode, sezvo mutyairi apfuura anga asina kuvandudzwa kwemakore mazhinji uye iri mu mamiriro anosiririsa.
Isu tinoronga kutsigira iyi vhezheni mushure meiyo codebase kamwe yabatanidzwa uye nekuwedzera nyowani
maficha uye gadzirisa mabugs. Semuenzaniso, rutsigiro ruzere rwekutsikisa paJBD richava
akawedzera mune yekupedzisira magadziriso.
Uye ndizvo izvozvo pamusoro, kuve nekuwana kwakazara kune NTFS zvikamu kubva Linux, yaifanira kushandisa iyo FUSE NTFS-3g mutyairi, iyo inomhanya munzvimbo yemushandisi uye haipe iyo yaunoda kuita. Uyu mutyairi haana kuvandudzwa kubvira 2017, kungofanana neyekuverenga-chete fs / ntfs mutyairi. Ose madhiraivha akagadzirwa naTuxera, ayo, saParagon Software, anopa mutengesi anowanikwa aripo weNTFS mutyairi.
Kana ari new controller iyo iwe yaunoda kuitisa muKernel, iyi inomira kutsigira ese maficha eiyo yazvino vhezheni yeNTFS 3.1, inosanganisira akawedzera mafaira hunhu, dhata yekumanikidza modhi, basa rinobudirira nemapapiro efaera, uye kutsiva kwerejista shanduko kudzorera kutendeka mushure mekundikana.
Mutungamiriri inovaka paParagon Software iripo yezvokutengeserana kodhi kodhi base uye yakanyatso kuyedzwa. Iwo maratidziro akagadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa kuti vagadzirire kodhi yeLinux uye haina mamwe maEMAI zvinongedzo, zvichibvumira mutyairi mutsva kuverengerwa mukuumbwa kukuru kweiyo kernel. Kana mangwe acho akasanganisirwa muchikamu chikuru cheLinux kernel, Paragon Software inotarisira kupa kugadzirisa, kugadzirisa zvipembenene, uye kugadzirisa mashandiro.
Mune chigamba 27 chigamba, Paragon Software yakashandura mutyairi kuitira shanduko muAPIni iov kutsiva iov_iter_copy_from_user_atomic () kufona ne copy_page_from_iter_atomic () uye kurega iyo iov_iter_advance () basa.
Kubva pamazano akaitwa muhurukuro, chete kududzirwa kwekodhi kunosara kushandisa fs / iomap, asi ichi hachisi chinhu chinosungirwa, asi chete kurudziro inogona kuitiswa mushure mekuiswa mune kernel. Uye zvakare, Paragon Software yasimbisa kuti yakagadzirira kuperekedza kodhi yakatsanangurwa muiyo kernel uye inoronga kufambisa kuitiswa kwemagazini kuti ishande pamusoro peiyo iripo JBD (jenicha block mudziyo) mune iyo kernel, pahwaro hwayo iyo magazini mu ext3, ext4, uye OCFS2 zvakarongeka.
Pakupedzisira, kune avo vanofarira kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Paragon Software's NTFS driver ichaiswa muLinux 5.15
Yekutanga MX Linux 21 Beta yakatoburitswa kuyedzwa
Iwo akakanganwika akavhurika sosi mapurojekiti